जब चिकित्सा उद्देश्यको लागि wormwood एकत्रित हुन्छ?
वार्मवुड बगैचाको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यो घाँस साँच्चै हटाउन गाह्रो छ। र यो ठूलो संख्यामा बढ्छ। तथापि, wormwood को लागि यस्तो नापसंद पूर्णतया अनुचित छ। आखिर, यो एक बहुमूल्य औषधि बिरुवा हो। पुरातन समयका कारण यो धेरै रोगहरूको सामना गर्न प्रयोग भएको छ। यो रोपणका लागि के उपयोगी छ विचार गर्नुहोस्, यसलाई कसरी लागू गर्ने र कर्मवुड सङ्कलन गर्ने।
वर्मवुड एक जडीबुटी पनीरियल संयंत्र हो। बोटानवादले यसलाई कम्पोजिटिटीको परिवारलाई बुझाउँछ। पौधेमा विशिष्ट विशेषता गंध छ। यसको अतिरिक्त, उहाँसँग धेरै कडा स्वाद छ। वर्मवुडको स्टेम शाखा, गंदे-बैजनी हो, पत्तिको पन्नामा विच्छेदित फारम छ। शीर्ष मा, तिनीहरू रंगमा हरियो हरी हुन्, र तलको हल्का हरियो पैलेटको छेउमा छ। बिरुवा फूलहरू ट्युलरर, सानो, पहेँलो रंगमा छन्। घास माथि 50 सेन्टिमिटरसम्म उचाई पुग्छ, र कहिलेकाँही धेरै।
जुलाईमा अगस्तमा भर्जवुड ब्ल्लो, एक नियमको रूपमा। यदि फ्लोरिङको तयारीको लागि फ्लोरोसेन्सहरू आवश्यक छन् भने, wormwood सङ्कलन गर्दा याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यो फूल अवधिको समयमा थियो।
यो रोपण पर्याप्त जहर छ। बर्मोरीको वरिपरि बढ्दै जान्छ, प्रायः मर्छ। जनावरहरू यो सावधानीबाट बच्न तथापि, ह्वाइलरहरूले यो बिरुवा पर्याप्त स्वस्थ छ भन्छन्। यसको औषधि गुण आधिकारिक औषधि द्वारा पनि मूल्यांकन गरियो। यो ज्ञात छ कि यदि भर्मवुड अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिन्छ र यसको दुर्व्यवहार नगरेको छैन भने प्रकृतिको अद्भुत उपहार विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट निको पार्न सक्दछ।
प्रकृतिमा, यो बिरुवाको थुप्रै किस्ताहरू छन्। बोटनीले आर्गुमेन्टको 400 भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्। निस्सन्देह, तिनीहरू सबै आफ्नो उपस्थितिमा एकअर्काबाट भिन्न हुन्छन्। यद्यपि, हरेक प्रजातिहरू प्राणी छैन। यसकारण, तपाईलाई थाहा छ कि कस्मेटिक औषधिको लागी कम्मरको काठ को लागी। त्यसकारण, ह्वाइलरहरूले यसो भनेका छन् निम्न उप-प्रजातिहरू औषधीय गुणहरू छन्:
सबैभन्दा लोकप्रिय कताई कम्मरको काठ हो। यो बिरुवा आधिकारिक औषधिमा ठूलो मात्रा मा रहेको छ। यो जडी बूटी को विभिन्न प्रकार को रोगहरु को मुकाबला गर्न को लागि धेरै धेरै वर्ष को लागि प्रयोग गरिएको छ। यो अनुमानित कडा वार्मवुड र सुन्दर बास्केटबल।
यो उपन्यास फरक छ सजिलो। यसको विशेषता विशेषता एक ग्रेनी र चांदी रंग हो।
Wormwood एकत्रित गर्दा पत्ता लगाउनु अघि, तपाईंलाई यो पौडको उद्देश्य के हो र कुन रोगले यो मद्दत गर्न को लागी संकलन गर्न बुझ्न आवश्यक छ। यसैले, हामी पहिले यसको संरचनामा फर्कन्छौँ।
घाँसको कचौरा स्वादले यसमा समावेश ग्लिसकोइड्स द्वारा आर्यो - एनाबिन्निन, अर्टबिन्सिन, अनफिनिन। Wormwood tannins, saponins, flavonoids, जैविक एसिड मा अमीर छ। यसको अतिरिक्त, यसमा phytoncides, भिटामिन, आवश्यक तेल छ। तर घाँसको मुख्य भाग धेरै विषाक्त पदार्थ - थुजोन हो। रोप्ने अर्को सक्रिय घटक chamazulene छ। यो घटकमा उच्च उपचार गुणहरू छन्।
वार्मवुड, यस तथ्यको बावजुद यो जहरीले पदार्थहरू छन् र एक कडा स्वाद छ, एक उपाय हो। यो आधिकारिक फार्माकोपिया मा समावेश छ र उच्च मांग मा छ।
अद्वितीय घास निम्न गुणहरू छन्:
यो ज्ञात छ कि संयंत्रले जस्ट्रोटिस्टिनल पथको कार्यलाई पूर्ण रूपमा उत्प्रेरित गर्छ, भूख बढाउँछ, बिसोले कम गर्छ, पित्तको उत्पादनलाई सक्रिय गर्दछ। यसको अतिरिक्त, wormwood एक शांत प्रभाव छ र ऊतक पुनरुत्थान प्रदान गर्दछ। घाँटी चोलगाग, गैस्ट्रिक संग्रहको भागको रूपमा लिइन्छ । यसको स्वागत पफनेस, अस्थमा, पनीर र लिभर पथोलोजी, मलेरियाको लागि सिफारिश गरिएको छ। Wormwood एक उत्कृष्ट antihelminthic एजेन्ट हो। यसको अतिरिक्त, यो अक्सर चोटहरु को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, चोट र चोटहरु संग।
र हालैका अध्ययनहरूले देखाएको छ कि वर्दीवुडमा एन्टीटाइमोर र ओप्पोक्रोटिक प्रभाव छ।
याद गर्न निश्चित हुनुहोस् कि कसरी कुनै उपाय, wormwood छ र अनुप्रयोगमा केहि सीमाहरू।
त्यसोभए घास घृणित हुन्छ:
Wormwood को प्रयोग को सिफारिश नहीं:
कम अम्लता संग gastritis संग;
यसको अतिरिक्त, तपाईंलाई थाहा छ कि wormwood लामो समयको प्रयोगको लागी इरादा छैन। यस जडी बूटी को लागि अत्यधिक प्रवर्तन तंत्रिका तंत्र को एक विकार हो, शरीर को नुक्सन। लामो समयको प्रयोगको पृष्ठभूमिको विरुद्ध, गुर्देको विफलता कहिलेकाहीँ विकास गर्दछ, जुन अत्यन्त नै दुखद परिणामहरू हुन सक्छ।
डाक्टरहरू र ह्वाइडरहरूले2हफ्तेको वुडवुड प्रयोग गरेर सिफारिस गर्छन्। उपचारको अधिकतम अवधि 1 महिना हुन सक्छ। तर केवल घटनामा कि मरीजको स्वास्थ्यले उपचारको समयमा बिग्रेको छैन। यस्तो उपचार पछि, ब्रेक अनिवार्य छ। यसको अवधि2हप्ता भन्दा कम छैन। र सबै भन्दा राम्रो - एक भन्दा बढी महिना।
क्यान्सरको क्यान्सर बढ्छ
वर्णन गरिएको संयंत्र धेरै असंभव छ। यो लगभग कुनै पनि माटो मा उत्तेजित गर्न सक्छ। यसैले wormwood एक विस्तृत विविधता साइटहरु मा पाउन सकिन्छ। यसले सफलतापूर्वक चराहरू, मेडावाहरू, साना नद्राहरू, सडकहरूमा चिसो बढ्छ। यो पहाडहरूमा ल्यान्डफिल्स, अपार्टमेन्ट भवनहरू नजिकै देख्न सकिन्छ।
तथापि, उपचारको लागि wormwood एकत्र गर्न कत्ति महत्त्वपूर्ण छ, र कुन ठाउँहरूमा। दबाइहरु को तयारी को लागी, एक घास को चयन गर्नु पर्छ जो पारिस्थितिक रूप देखि स्वच्छ स्थानों मा विशेष रूप देखि बढ्छ।
कब र कसरी काठमाण्डौं सङ्कलन गर्ने?
Curative grass stock up, it is best to sites sites landfills, highways, industrial enterprises from remote। यो वांछनीय छ कि यो एक पारिस्थितिक रूपमा स्वच्छ क्षेत्र हो।
उनीहरूले दबाइको लागि wormwood एकत्र गर्छन् जब हेर्छन्। सुरुमा, यो भनिएको छ कि घास को सबै भागहरु को उपचार को शक्ति हो: फूल, पत्तियां, जड। तर तिनीहरूलाई विभिन्न समयको समयमा खेती गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण, यदि तपाईं wormwood कड़वामा चासो राख्नुहुन्छ भने, ह्वाङ्गर्सका सिफारिसहरूलाई ध्यान दिनुहुन्छ।
जब कच्चा माल सङ्कलन गर्ने हो:
फूलहरू। नियमको रूपमा, तिनीहरूको कटौतीको अवधि जुलाई-अगस्ट हो, जब वर्मवुड सक्रियतापूर्वक फूलिरहेको छ। यो समयमा यो बिरुवा आवश्यक तेलहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या समावेश छ।
लीफलेट। तपाईं पेटियल्स बिना कच्चे माल फसल सकते हो। यस अवस्थामा, एक पाना काटिएको छ। फूल लगाउनु भन्दा राम्रो सामग्री सङ्कलन गर्नुहोस्।
Rhizome। बाहिर जानुहोस् भूमिगत भाग ले ढिलो शरद ऋतुको सिफारिश गरिन्छ। यो सामान्यतया अक्टोबर नोभेम्बर हो।
अब तपाईलाई थाहा छ कुन समयमा यो कडा काठको फसलको लागि आवश्यक छ। कच्चा मालहरू कसरी सङ्कलन र सुक्छ? आउनुहोस् हामी यस बिन्दुलाई थप विवरणमा विचार गरौं।
प्राय: फसल फूल फूल माथि छ। यो गर्न को लागि, कोमल र मोटो गोली मारने देखि बचने, स्टेम (लगभग 25 सेमी) को माथिल्लो भाग मा कटौती। यो घाँटी धुलाई पुर्याउन बिल्कुल छैन। सबै पछि, यो अवस्थामा, यो धेरै उपयोगी पदार्थ गुमाउँछ। यसको अतिरिक्त, धोएको बिरुवा राम्रो तरिकाले सुक्न गाह्रो छ। यसैले यो सफा क्षेत्रहरूमा भर्मवुड एकत्र गर्न सिफारिस गरिन्छ। र फसलको लागि धूप सुक्ने मौसम चयन गर्ने उत्तम छ।
सुखाने को लागि, अटारी मा या क्यान्सर को तल ले लो। यस खण्डलाई वायुमण्डलद्वारा पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ। त्यहाँ, कपडा वा कागज फैलियो, र पतली तहको साथ माथिको कच्चा माल राख्नुहोस्।
पुरा तरिकाले सुकेको पदार्थ फूल र हरियो रंग को पातहरु संग एक पतली स्तम्भ हो। कच्चा मालमा कडा काठको मसालेदार गन्ध छ। यो स्वाद जस्तै स्वाद।
कर्मुडको अर्को औषधीय जडी बूटीबाट एक सावधानीपूर्वक बन्द कंटेनरमा राखिएको छ। भण्डारण अवधि 1-2 वर्ष हो।
उपचारको लागी क्यान्सर काठ एकत्र गर्न जान्नुहुन्छ, तपाई सधैँ कच्चा माल तयार गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, घास केवल औषधीय उत्पादन को तयारी को लागि एकत्रित छैन।
स्नानको लागि Wormwood
धेरै हिसाबले पानीको प्रक्रियाका लागि घाँस प्रयोग गरेर सिफारिस गर्दछ। एक अनोखी बिरुवाको साथमा तपाईं कृत्रिम गठिया र गाउटसँग लड्न अनुमति दिन्छ। यस उद्देश्यका लागि यो 1 बाक्लो घाँसको पानीमा 1 बाल्टी पानी खानुपर्छ। परिणामी तरल स्नान मा पतला छ।
स्नान प्रक्रियाको बेलामा ठूलो लाभ भर्मवुड हो। यो कोठाको विभिन्न ठाउँहरूमा घाँसको सुक्खा धुरीहरू झुन्ड्याउन सिफारिस गरिन्छ। नम र हावा हावामा, बिरुवाले आवश्यक तेल र फ्टोटोस्काइड जारी गर्न सुरु गर्दछ। यो ज्ञात छ कि बिरुवाको गंधले जीवनशैली बढ्न सक्छ, मूड सुधार गर्न बलियो बनाउँछ।
अनि अब विचार गर्नुहोस् जब स्नानको लागि भर्मवुड सङ्कलन गर्ने। जादूगरहरूले तपाईंलाई फूल बनाउने बेला फसलको सुझाव दिन्छ। यो यस अवधिको समयमा घाँसमा अधिकतम उपयोगी घटक समावेश छ। कटनीकरणको लागि यो पोल (शीर्ष 25 सेन्टीमिटर) को माथि काट्न सिफारिस गरिन्छ।
ताजा घाँस बन्डलहरूमा बाँधिएको छ। यसलाई एक चन्द्रमा राखेर सुक्खाएको ठाउँमा सुखाएर, बिस्कुट माथि लम्किरहन्छ।
अनुपस्थितीको लागि Wormwood
यो कुनै रहस्य छैन कि कडा कपालको कडा जडी बूटी को आधारमा बनाइन्छ। कसरी र कहिलेकाहीं अनन्तको लागि wormwood एकत्र गर्ने?
कच्चा माल को तयारी को लागी निम्नलिखित सिफारिशहरु लाई मनाई जानी चाहिए:
केवल फूल र पातहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। खाना पकाउने ट्रेक्रेक्चरहरूको लागि प्रयोग गरिएको छैन, किनभने तिनीहरू आवश्यक तेलको आवश्यक मात्रा समावेश गर्दैनन्।
Absinthe कडा कडा काठको आवश्यकता छ। यो उप-प्रजातिमा सबैभन्दा ठूलो थुजोन हो।
कच्चा माल क्षतिबाट मुक्त हुनु पर्छ (रोगहरू, कीराहरू) र अशुद्धताको नि: शुल्क।
घाँस सूखा, पेपर वा कपडामा फैलियो। कडा रूपमा छापिएको कन्टेनरमा राख्नुहोस्। यसले यो आवश्यक तेलहरूको मौसममा जोगाउँछ।
खाना पकाउने वर्मवुड
एक अद्वितीय जड़ी बूटी स्वादिष्ट व्यंजन पकाने को लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। पाक कलामा कालो टोपी (सेतो वर्मवुड) मा मांग छ । यो बिरुवा माथि उल्लेखित कड़वा सबपेकियों बाट अलग हुन्छ, रातो फूलहरु संग।
पाक उद्देश्यका लागि पत्रपत्रहरू प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू पहिले फूल वा फूल बनाउने बेलामा संकलन गरिन्छ। हावामा हावाको सामान सुत्नुहोस्। त्यस पछि, एक मोर्टार मा राम्रो तरिकाले पीडित र भण्डारण को लागि एक सील कंटेनर मा सो को निद्रा। यस्तो पाउडर मासु भाँडा र सलाद को लागि सूक्ष्म स्वाद र अपरिपक्व स्वाद दिन सक्षम छ।
Aspen छाल को औषधीय गुण के-के हुन्?
Reishi च्याउ। लाभदायी गुण को समीक्षा
एक मानिस एक blowjob कसरी बनाउने
Sebastopol कहाँ छ? युक्रेन नक्सामा Sevastopol। शहर Sevastopol
क्लीनर iRobot निर्वात। ग्राहक समीक्षा
सेल्युलाइटको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय के हो?
शब्द यी जटिल प्रकारका
औषधि 'Pegasys'। निर्देशनहरू। विवरण